သငျသညျ Cisco က CCNA လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးနှင့် ပတ်သက်. သိကျွမ်းရမည်ဖြစ်သည်5အမှုအရာ | ယင်း
16 နိုဝင်ဘာ 2017
သငျသညျ Cisco က CCNA လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးနှင့် ပတ်သက်. သိကျွမ်းရမည်ဖြစ်သည်5အမှုအရာ
Cisco က CCNA လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေး
အဆိုပါ Cisco က CCNA လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးတစ်ဖဲ့ကိုရခြင်းကဘာလဲကြင်နာခေါင်းစဉ်များ၏ရှိပါသလဲ
တစ်ဦး Cisco က CCNA လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးစာမေးပွဲဖြေဆိုတက်ယူဖို့အတွက်ကုန်ကျစရိတ်ကဘာလဲ?
အဘယ်မှာဈအခမဲ့ CCNA လေ့လာမှုလမ်းညွှန်ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်နည်း
အဆိုပါ CCNA လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးစာမေးပွဲတွင်အဘို့အစီစဉ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
အချိန်နှင့်လုံ့လဝိရိယအလုပ်တစ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လက်မှတ်မူတည်ရေရှည်မှာအပေါ်အမြတ်ဖြစ်ခြင်းတက်အဆုံးသတ်များဝယ်ယူရန်ထဲသို့သွင်းထား။ Cisco က CCNA လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေး တိကျတဲ့နယ်မြေအတွင်းရှိလူတစ်ဦး၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စွမ်းရည်အတည်ပြုခြင်းနှင့်အောက်ပါအချက်များကိုအဆင့်အထိထောက်ခံမှုမှေးလုပျငနျးကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ကိုကူညီနိုင်သည့်တဦးတည်းထိုကဲ့သို့သောအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
CCNA Cisco Certified Network Associate တစ် Self-spellbinding လက်မှတ်အစီအစဉ်ကိုအဖြစ်သိပ်သည်းနေသည်။ လူယောက်ျားသည်အရည်အချင်းများကိုထိရောက်စွာရယူထားပါတယ်အခါမှာသူတို့စနစ်များကိုအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ဆက်စပ်အရည်အချင်းများမှာကျွမ်းကျင်အဖြစ်ရှုမြင်နေကြသည်။
အဆိုပါလက်မှတ်စမ်းသပ်မှုပျံ့နှံ့နေတဲ့အိုင်တီကုမ္ပဏီတစ်ခုက Cisco သည်အားဖြင့် check လုပ်ထားနှင့်ပေးထားသည်။ လက်တွေ့ကျကျတိုင်းစက်မှုလုပ်ငန်းစည်းရုံးရေးအစီအစဉ်များလိုအပ်ပါတယ်သောလမ်းထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း, အရည်အချင်းများအိုင်တီပညာရှင်များအကြားကြီးမားပျံ့နှံ့ရရှိသောနှင့်တစ်သမတ်တည်းအများဆုံးလူသိများတဲ့လက်မှတ်အစီအစဉ်များအကြားတစ်ဦး standout ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုယခုအနှစ်စုံတွဲတစ်တွဲများအတွက်န်းကျင်ခဲ့ပေမယ့်, ဒီလက်မှတ်အစီအစဉ်ကိုနောက်ကွယ်မှသောအဖွဲ့အစည်းက Cisco သည်ဖွံ့ဖြိုးဆဲတတ်ကြပြီးပိုကောင်းတဲ့ဝတ်စုံကိုစက်မှုလုပ်ငန်းပုံစံများကိုပြောင်းလဲသောရည်မှန်းချက်နှင့်အတူဘာသာရပ်များပြောင်းလဲပစ်။
သူတို့တစ်တွေအထူးသဖြင့်အကွာအဝေးအတွင်းရှိအချို့သောကျွမ်းကျင်မှုရှိသည်ဖို့ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအားဖွင့်အမျိုးမျိုးသောအလုပ်အကိုင်အထူးသဖြင့်စာမေးပွဲဖြေညျဆောကျသညျ့အခါတစ်ဦးကမှတျသားဖှယျဒီဇိုင်းအသစ်ယခုနှစ် 2013 ၌ပြစ်မှားမိခဲ့သည်။9ကွဲပြားခြားနား CCNA themes များတစ်ပေါင်းလဒ်သည်လက်ရှိတွင်လက်လှမ်းဖြစ်ကြပြီးသင့်ရဲ့အနာဂတ်ရည်ရွယ်ချက်များကိုမှန်ကန်သောအထူးပြုခေါင်းစဉ်ကောက်လို့ရပါတယ်။
CCNA တိမ်တိုက် - အဆိုပါဘာသာရပ်သည်အထူးလေးနက်စွာမိုဃ်းတိမ်ကိုတိုးတက်မှု, သိုလှောင်ခြင်းနှင့် Cisco သည်မိုဃ်းတိမ်ကိုအစီအစဉ်များအပေါ် concentrates ။ မိုဃ်းတိမ်ကိုဆန်းသစ်တီထွင်မှုသိသိသာသာဘုံဖြစ်လာပြီနှင့်အတူ, ဒီများစွာသောစမ်းသပ် takers ကသိသိသာသာစီးအဖြစ်ရှုမြင်သည်။
CCNA ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် - ယင်း IP ကိုဆက်သွယ်ရေးအတွက်အလုပ်လုပ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ, လယ်ကွင်းစည်းရုံးရေးစကားသံကို, ဒေတာ, ဗီဒီယိုများနှင့်ခရီးဆောင် applications များနှင့်အတူဖော်ထုတ်ကွဲပြားခြားနားသောတီထွင်မှုများဖုံးအုပ်နေတဲ့ဝေးရောက်ရှိသင်တန်းဖြစ်သောပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရွေးနိုင်သည်။
CCNA ဆိုက်ဘာ Ops - ကိုလက်စသတ်သောအခါ, အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်တစ်ခုအသင်းအဖွဲ့၏အဆင့်မြင့်လုံခြုံရေးကြီးကြပ်များအတွက်တပ်ဆင်ထားတဲ့ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးမာစတာသူပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖော်ပြသည်။
CCNA မှာ Data Center ကို - ဒီတိကျတဲ့စမ်းသပ်ပြည့်နှက်နေလေသည်အကြောင်းများ, ဒေတာစင်တာကိုတည်ဆောက်ခြင်းစနစ်စီစဉ်, ဒေတာအုပ်ချုပ်ရေး, ဂီယာနဲ့ hardware တက်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်ဆက်နွယ်။
CCNA စက်မှု - အဆိုပါလက်မှတ်ကိုထိရောက်စွာရေနံ, သဘာဝဓာတ်ငွေ့, လျှပ်စစ်နှင့်တပ်ဆင်ဒေသများအပါအဝင်စက်မှုဇုန်ရိုးအမြစ်ကို run ဖို့လိုအပ်သောစနစ်များကိုအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်စစ်ဆင်ရေးနားမလည်ဖို့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးနိုင်ပါတယ်။
CCNA Routing နှင့် Switching - Cisco ကအပေါ် concentrates ကြောင်းဘာသာရပ်ဗဟို - ကပကတိလိုအပ်ချက်ရဲ့အားလုံး system အတွက်အသိအမှတ်ပြုတည်ဆောက်နှင့်မည်သည့်စနစ်အားပရော်ဖက်ရှင်နယ်အထိကြာနိုင်သည်အခြေခံစမ်းသပ်မှုဖြစ်ပါတယ်ပါပြီ။
CCNA လုံခြုံရေး - ဤအစီအစဉ်ပြီးသွားသူ၎င်း၏အသုံးပြုနိုင်စွမ်းစောင့်ကြည့်, ဒေတာလုံခြုံရေးအတွက်လုံလောက်သောသတင်းအချက်အလက်များရှိသည်ဖို့အတည်ပြုမျှဝေကာစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ကာကွယ်ပေးအဆင့်မြင့်အခြေခံအုတ်မြစ်ကိုစုဝေးကူညီပေးနိုင်ပါသည်ဖြစ်ပါတယ်။
CCNA Service Provider - အဆိုပါသင်တန်းကိုတစ်ဦးဝန်ဆောင်မှုအဖြစ်အသင်းအဖွဲ့များကိုကူညီစနစ်ကအထူးကုအဖြစ်စစ်သားစုဆောင်းရေးအတွက်အလုပ်လုပ်သူတွေကိုအားဖြင့်ကိုလက်စသတ်နေသည်။ သင်တန်းပြီးမြောက်ရန်သူတို့ထူးချွန်ကျွမ်းကျင်မှုစွမ်းရည်နှင့်စနစ်များအုပ်ချုပ်ရေးအတွက်လက်ရှိပုံစံများအတွက်အစိုင်အခဲအလှည့်လိုအပ်သည်။
CCNA Wireless က - အခါပရော်ဖက်ရှင်နယ်ချောအားလုံးကြိုးမဲ့စနစ်များအုပ်ချုပ်မှုဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောကျွမ်းကျင်မှုစွမ်းရည်ကိုထိရောက်စွာဒီစမ်းသပ်မှုရဖို့သေချာနေကြသည်။ သူတို့ကစီစဉ်သည်နိမိတ်လက္ခဏာကိုအရည်အသွေးကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်လုံခြုံကြိုးမဲ့မူဘောင်တက် setting တာဝန်ခံ၌ရှိကြ၏။
တစ်ခုချင်းစီကို CCNA လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးစာမေးပွဲတွင်သီးသန့်ကွိုးစားခံရဖို့သင့်၏။ Cisco ကစာမေးပွဲနှုန်း $ 295 တစ်တည်မြဲ CCNA စာမေးပွဲကုန်ကျစရိတ်ရှိပါတယ်။ အဆိုပါခန့်မှန်းချက်နှုန်းထားများနှင့်ကွဲပြားခြားနား variable တွေကိုပြောင်းလဲသင်၌နထေိုငျခရိုငျ၏အမြင်များတွင်သာအတက်အကျလိမ့်မည်။ သင်စာမေးပွဲဖြေဆိုလျှောက်ထားမှီကတရားဝင် site ကိုစစျဆေးဖို့လာဘ်ဖြစ်ပါတယ်။
အခမဲ့တွေ့ရှိ CCNA လေ့လာမှုလမ်းညွှန် ဝဘ်ကျော်သင်ထင်ကြပေမည်ကဲ့သို့ဒုက္ခမဟုတ်ပါဘူး။ ကုန်ကျစရိတ်အခမဲ့အခြေခံသည့်လမ်းညွှန်၏အသီးအသီးပေးရလိမ့်မယ်သူတစ်ဦးအနည်းငယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်စမ်းသပ်မှုဝန်ဆောင်မှုပေးရှိပါတယ်။
ဤအလမ်းညွှန်အချို့ပေါ်တွင်ဒေါင်းလုဒ်လုပ်လို့ဆက်သွယ်မှုအဖြစ်အွန်လိုင်းအသုံးမပြုနိုင်နေမြဲနေစဉ် YouTube ကို နှင့်အခွင့်အာဏာလမျးညှနျခက်ဘ်ဆိုက်များမှတဆင့်, သင်ထိုနည်းတူယူဆအဖွဲ့အစည်းများကကမ်းလှမ်းခဲ့သည်အလယ်အလတ်စီမံကိန်းများကိုလက်ခံရန်သဘောတူနိုင်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောသင်တန်းများကိုလက်ခံရန်သဘောတူလတ်တလောရရှိရန်ကူညီ CCNA လေ့လာမှုလမ်းညွှန် ထိထိရောက်ရောက် Cisco သည်စမ်းသပ်မှုပြီးဆုံးကြသူသင်တန်းဆရာများအတွက်ကုန်ကျစရိတ်နှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကူအညီများ၏အချည်းနှီးအဖြစ်အရေးကြီးသော။
သင်တစ်ဦးစမ်းသပ်တက်ယူမီ, ကမျှော်လင့်ချက်တွေအတွက်စမ်းသပ်မှုယူစရာအခြေစိုက်စခန်းအရည်အချင်းများရှိကွောငျးနားလည်သဘောပေါက်ရန်အရေးကြီးပါသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေခြင်း, CCNA Routing နှင့် Switching တစ်ဦးချင်းစီကတခြားစာမေးပွဲတွင်များအတွက်အခြေစိုက်စခန်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသိသိသာသာလျော့နည်းတောင်းဆိုမှုများအဖြစ်ရှုမြင်သည်ပိုမိုဒုက္ခစာမေးပွဲရှင်းလင်းရန်သင့်အား enable ပါလိမ့်မယ်။
CCNA သင်ကြားပို့ချအတန်းနှင့် module တွေစမ်းသပ်ကြိုးစားမတိုင်မီပိုကောင်းသင်ရိုးညွှန်းတမ်းနားမလည်ဖို့အခြေခံအကျဆုံးဖြစ်ကြောင်း
အမှန်မှာထိုလယ်၌ပါဝင်ပတ်သက်မှု၏တစ်ဦးအလွန်ရှည်လျားအချိန်သူကိုတောင်တစ်အိုင်တီပရော်ဖက်ရှင်နယ်လမ်းညွှန်များ perusing စဉ်းစားပါနှင့်စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ဒီဇိုင်းကိုနားမလည်သင့်၏။ ဒါဟာမူလတန်းကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုမှာအရည်အချင်းပြည့်မှီမှတဦးတည်းကို enable ပါလိမ့်မယ်။
ကအများဆုံးအကြံပြုနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်, များစွာသောအလေ့အကျင့်စာမေးပွဲများတက်ယူပါ။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုစွမ်းရည်ထက်မြက်လျှင်မြန်စွာအဖြေတွေကိုဖော်ပြခြင်းနှင့်စိုးရိမ်ခံစားမရှိဘဲတစ်နှစ်စမ်းသပ်၏အဆုံးကိုတက်ယူရန်သင့်အားဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်ကူညီပေးသည်။
အဆိုပါစမ်းသပ်မှုသင်သည်အရည်အချင်းပြည့်မီရန် 1000 ဂိုးသွင်းသငျ့သညျထကျတတ်၏ရာ 825 တစ်ပေါင်းလဒ်များအတွက်ညွှန်ကြားနေသည်။
30 မိနစ်မသိဘဲရမ်းမေးတဲ့သင်ယူမှုသည်သင်၏ရယူဖို့အခြေခံဖြစ်သကဲ့သို့စာအုပ်တွေ peruse မှနေ့စဉျသုံးစွဲခြင်းကိုခံရသင့်၏, ထက်လျော့နည်းခြင်းမရှိပါ CCNA လက်မှတ်။ သငျသညျဒုက္ခအဆိုပါဘာသာရပ်များမဆိုရှာဖွေတွေ့ရှိသောချွတ်အခွင့်အလမ်းတွင် ပို. စွမ်းအင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းသို့မဟုတ်ယုံကြည်စိတ်ချပြင်ဆင်နေတည်ထောင်ခြင်း join ။ web ပေါ်မှာအခမဲ့စမ်းသပ်မှုတွေရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းနှင့်ရက်သတ္တပတ်များကသူတို့ကိုတပတ်နျကွိုးစား။
မြောက်မြားစွာကအခြားပရော်ဖက်ရှင်နယ်လက်မှတ်အစီအစဉ်များနှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်, Cisco သည်အားဖြင့် CCNA ကပယောဂသူတို့ရဲ့လယ်ပြင်၌ရှိသောမြေကြီးပေါ်ချပေါများခြင်းနှင့်လည်းမသိဘဲရမ်းမေးတဲ့သတင်းအချက်အလက်ရှိသည်ဖို့ပုဂ္ဂိုလ်လိုအပ်ပါတယ်သောမြေပေါ်တွင်ဒုက္ခအဖြစ်ရှုမြင်သည်။ သင်အတွေးအခေါ်များကိုနားလည်မှကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျူးလွန်ပြီးတည်ငြိမ်လေ့လာမှုဒီဇိုင်းပြီးနောက်ယူသည့်အခါမဆိုအမှု၌, ကစစ်မှန်တဲ့စမ်းသပ်မှုအတွက်မေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များဖြေကြားသိသိသာသာရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
ထို့အပြင်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကိုမှန်ကန်အဖွဲ့အစည်းများအစဉ်မပြတ်သူတို့ရဲ့အဖွဲ့ကို join ဖို့အာမခံချက်စည်းရုံးရေးပညာရှင်များရှာဖွေနေကြသည်။ ကကြိုးမဲ့စနစ်များအုပ်ချုပ်မှုပုံစံဒီဇိုင်း, လုံခြုံရေးမာစတာတစ်ခုသို့မဟုတ် data ကိုအလယ်ဗဟိုစီမံခန့်ခွဲသူဖြစ်, ကျယ်ပြန့်အလုပ်ကိုအစိတ်အပိုင်းများကိုတစ်ခုကျယ်ပြန့်အလုပ်အကိုင်ရွေးချယ်မှုပေးပါ။ အဆိုပါလှုပ်ရှားမှုအလားအလာနှင့်သက်မွေးဖှံ့ဖွိုးတိုးတတစ်ဦးတို့ကပေးခဲ့တယ် Cisco သည်CCNA လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေး တကယ်စာမေးပွဲဖြေဆိုဘို့ကိုယ့်ကိုကိုယ်တက် setting ထဲမှာသုံးစွဲအချိန်ကိုတရားဝင်ဖြစ်စေပြီး။
CCNA မှာ Data Center ကို - Cisco ရဲ့ဒေတာများကိုစင်တာသစ်ကဘာလဲ